Ukukhishwa - Ukhiye wezinwele zakho ukukhula ngokushesha | Bezzia
Akusikho okokuqala ukuthi sifune ukubona ukuthi izinwele zethu zikhula kanjani ngokushesha. Yebo, usuvele ukhathele kancane ukufuna zonke izinhlobo zezixazululo zayo. Namuhla sizobona okunye okuvame kakhulu, esinakho ezandleni zethu kepha mhlawumbe asihlali sikunikeza ukubaluleka okuphethe ngempela: ukukhululwa.
Ngoba njengoba kwenzeka kuwo wonke umzimba, ukukhishwa kwamafutha kuyindlela ezothuthukisa kakhulu isikhumba sethu. Kungenxa yalokho uma sicabanga ngezinwele, noma kunalokho isikhumba sasekhanda, ngeke ishiywe ngemuva. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi yiziphi izinyathelo okufanele uzilandele?
1 Kungani ukukhipha ukhiye kuyindlela ebalulekile yokukhula kwezinwele ngokushesha?
2 Khipha isikhumba sasekhanda ngekhofi
3 Ushukela namafutha omnqumo wezinwele zakho
4 Ushukela nolamula
Kungani ukukhipha ukhiye kuyindlela ebalulekile yokukhula kwezinwele ngokushesha?
Njengoba sazi kahle, exfoliate avalelise kumaseli afile. Ngakho-ke, lapho sikwenza esikhumbeni, sizokuqeda konke okweqile, ukwenza indawo yokuthuthuka. Kulokhu, kwenzeka into efanayo ngoba lokho esizokwenza ukukhipha isikhumba sethu ekhanda, okuhlala sikudinga. Yindawo lapho amafutha athanda ukuqoqeka khona ezimweni eziningi, kanti kokunye kuba ukoma. Ngokukhishwa kahle komzimba sizobe sisiza isikhumba kule ndawo, ukuvalelisa izinsalela ezithile zomkhiqizo kwesinye isikhathi ezihlala ezinweleni nasekujikelezeni okuvuselelayo ukuze izinwele ziqale ukukhula ziqine kunakuqala. Ungabona konke lokhu kubonga ngokusebenzisa amakhambi emvelo esiwaphakamisayo.
Khipha isikhumba sasekhanda ngekhofi
Ikhofi powder ingenye yezindlela ezisetshenziswa kakhulu lapho sifuna ukukhipha amafutha. Ngaphezu kwalokho, kuyisithako sonke esinaso ekhaya ngokuqinisekile. Ngakho-ke, sizodinga izipuni ezine zekhofi ukuqala ukulungisa ingxube yethu. Kepha ukuze ukubhucungwa kuphelele ngokwengeziwe nokuthi kube lula kithina, akukho okufana nalokhu Hlanganisa ikhofi nezipuni ezimbili ze-yoghurt yemvelo noma uma ungenayo, uwoyela omncane kakhukhunathi. Ukuze lokhu kusisize ngokwengeziwe lapho senza i-massage. Lokhu kuzoba sezandleni zomunwe, ngaphandle kokufaka ingcindezi eningi kakhulu nokumboza yonke indawo kahle.
Ushukela namafutha omnqumo wezinwele zakho
Enye indlela yokwenza ukukhishwa kwe-exfoliation ukusisiza ngoshukela. Ama-granite akho azosishiya nomphumela omuhle okufanele siwucabangele. Kepha kuyiqiniso ukuthi ngaso sonke isikhathi kuzofanele siyihlanganise nenye into, ukuze ishibilike kangcono esikhunjeni. Kulokhu, kuzoba ngamafutha omnqumo. Njengoba sazi kahle, lokhu unesibopho sokuhlinzeka nge-hydration, ngaphezu kokuqeda zonke izinhlobo zemfucuza nokusinika ama-antioxidants. Ungomunye wemibono esithanda ukuba lula ukuwenza kanye nemiphumela yawo emihle.
Leli remedy liphelele kubantu abanesikhumba sezinwele ezinamafutha. Ngoba njengoba sazi ulamula uzophatha ukulawula i-sebum. Ngakho-ke ngawo, ushukela uzofika, ozophinde uphathe ukuhudula konke ukungcola esinakho. Ukuze uthole ikhambi elinjengaleli, akukho okufana nokuba nenani elifanayo lesithako esisodwa nokunye. Futhi, khumbula ukuthi ulamula ezinweleni zakho, uma uthola ilanga, ungalenza likhanye. Ngakho-ke, lezi zinhlobo zemibono zihlala zenziwa kahle kakhulu ebusuku lapho singasaphumi. Izinwele zakho kufanele zibe manzi ngandlela thile lapho uzozisebenzisa. Ukusuka lapha, uzoqala ngokubhucunga ngendlela eyindilinga futhi ngemuva kwemizuzu embalwa, ungageza izinwele zakho njengokujwayelekile. Ngokuqinisekile uzobona imiphumela yayo ngokushesha!
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ubuhle » Ukukhishwa kwamafutha kuyisihluthulelo sokwenza izinwele zakho zikhule ngokushesha